FINOANA FIKRIFA : Nankalazaina ny faha-10 taona nitandreman’ny pasitora Herinaina
Nomarihina ny alahady teo ny jobily faha-10 taona nitandreman’ny pasitora Heriniaina ny asa fanompoana tao amin’ny fiangonana Fikrifa Antanimalandy. 13 août 2019
Nifanindran-dalana tamin’ny tsingerintaona fahaefapolo nahaterahan’ity pasitora ity koa io Jobily natao ny alahady 11 aogositra lasa teo tao amin’ny fiangonana Fikrifa Antanimalandy Rn4.
Iray volana no faharetan’ireo hetsika maroloko nankalazana ny jobily, izay efa nosantarina hatraminy 04 aogositra. I pastora Clovis, avy ao Antanimasaja no nitarika ny fotoan-dehibe teto, raha i pastora Rabehasy Sylvain, izay filoha nasionalin’ny Fikrifa eto Madagasikara kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra. Taorian’ny fotoam-pivavahana lehibe natao tamin’io alahady 11 aogositra io, dia nisy ny sakafo niraisan’ny rehetra tao amin’ny villa Faharetana, mifanila amin’ny toerana misy ny fiangoanana, ary nofaranana taminy fanapahana mofomamy.
Notronin’ireo pasitora mpiara-miasa aminy ao amin’ity sahan’ ny fanompoana Fikrifa sy ny fiangonana hafa koa izao fotoan-dehibe izao, sy ireo fianakaviana akaiky ary ny mpiara-manompo avy any amin’ireo zanaka am-pielezan’ny Fikrifa Ambondromamy kely sy avy any Ambalika ity jobily ity.
Hosantarina amin’io taona 2020 io ny fametrahana ny vatofototra hananganana ny tranovatom-piangonana ao amin’ny fiangonana Fikrifa Antanimalandy, izay itandreman’i pastora Heriniaina Rakotomanga. Hisy ny antsam-panahy atao any amin’io fiangonana io mandritra ity volana aogositra ity, isaky ny tolakandron’ ny alahady ho tohin’ny fankalazana.